Ergayga QM ee Liibiya oo sheegay in heshiis laga gaaray dagaaladii ka socday Tripoli. – Hiddo Radio 98.5 FM
Ergayga QM ee Liibiya oo sheegay in heshiis laga gaaray dagaaladii ka socday Tripoli.
War ka soo baxay Qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in kooxaha milishiyaadka ku dagaallamayey magaalada Tripoli ee caasimadda Wadanka Liibiya ay heshiis xabbad joojin gaareen,si loo dhameeyo qulqulatooyinka halkaasi ka jira.
Dowladda Liibiya ayaa sheegtay in dagaallada guadaha magaaladaasi Tripoli ka socday dhowrki toddobaad ee ugu dambeeyey ay ku dhinteen ugu yaraan 47 qof in kabadan 1,800 qoysna ay ku barakaceen,waxaana haatan socda dadaalo ku aadan sidii colaadahaasi loo soo afjari lahaa.
Danjiraha QM u qaalisan Dalka Liibiya Ghassan Salame ee heshiiska xabbad joojinta waday ayaa sheegay in ‘heshiiska la gaaray uu soo afjarayo dagaalka magaalada ka socday, laguna badbadinayo dadka rayadka ah ee ay dagaalladaasi saameeyeen,kuwaasi oo hatan wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha iyo ammaanka.
Ergayga QM ee heshiiskaasi hor boodaya ayaa sidoo kale ku tilmamaay heshiiska in uu yahay mid gacan ka geysanayaa sidii dib looga furi lahaa gigada diyaaradaha kali ah ee waddanka oo dhan adeeg ka bixiyo ee Tripoli oo gabi ahaanba xidhnaa tani iyo 31-ka bisha August.
Goobta heshiiskaasi lagu saxiixayay waxaa goob joog ka ahaa,saraakiisha ciidamada dowladda Libiya, hoggamiyeyaasha milishiyaadka iyo xubno ka socday qaramada midoobay,iyadoo Heshiiskan uu ka mid yahay iskudayada lagu doonayo in magaalada Tripoli dagalaaka ka taagan lagu joojiyo.
Previous Article In kabadan 10 qof oo ku geeriyootay qarax ka dhacay Warshad kutaala K/Afrika.
Next Article Dibadbaxayaal lagu dilay magaalada Basra ee dalka Ciraaq